Isangqa Slewing / I-Slewing Bearing
Iibheringi ezirhuqayo zinokuthwala i-axial, i-radial kunye nemithwalo yomzuzu esebenza ngokukodwa okanye ngokudibeneyo nakweliphi icala. Azikhweliswanga kwindlu okanye kwishafti, kodwa ngokuthe ngqo kwindawo yokuhlala. Iiringi zangaphakathi nezangaphandle zibonelelwa ngemingxunya yokunyuka. Zombini izangqa zinokuba nezixhobo ezifanelekileyo. Kukwabhekiswa kuzo njengamakhonkco okucheba kunye neebheringi zeetafile. Iibheringi zeringi e-Slewing zinokwenza ukujikeleza (i-slewing) kunye nokujikeleza okujikelezayo. Zingasetyenziswa ngaphandle kwegiya okanye ngegiya zangaphakathi okanye zangaphandle.
Iibheringi ezihlaselayo ziibheringi ezinkulu ezikhulu ezinokuthwala i-axial ephezulu, imithwalo yeeradial kunye nexesha lokujika. Iibheringi ezifunxa zihlala zihonjiswe ngemingxunya enyukayo, amagiya angaphakathi okanye amagiya angaphandle, imingxunya yokuthambisa izixhobo zetywina. Umnqamlezo we-cylindrical roller slewing bearing unamandla amakhulu.
Iibheringi ze-slewing zisetyenziswa kakhulu kwiikhreyithi, oomatshini bokwakha, izibuko kunye neendlela ze-shi kunye nokuchaneka okuphezulu kwiitafile ezinkulu zokujika iiradars kunye nemijukujelwa yomjukujelwa
1.four-point ball contact slewing bearing (no gear, gear zangaphandle, gear ngaphakathi);
2.ibhola-kabini umqolo slewing ethwele;
3.crossed cylindrical roller slewing bearing (akukho giya, izixhobo zangaphandle kunye nezixhobo zangaphakathi);
Umqolo wesithathu we-cylindrical roller slewing bearing
Iinkcukacha ezingakumbi:Ukukhuphela iringi yeSlewing